Faroole Oo Booqanaya Deegaankii Khasaaraha Ugu Badan Kala Kulmay Duufaantii Bishii Hore * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garowe, Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdirxman Maxamed Faroole ayaa maanta u ambababaxay deegaanka Qarxis oo ka mida deegaanadii ay duufaantu saamaysay bishii aynu soo dhaafnay.
Boqolaal qof ayaa lagu waayay deegaankaas, ku dhowaad hal Malyan oo xoolo ayaa ku baqtiyay, waxana sidoo kale cayroobay boqolaal qoys.
Maamulka Puntland, Culimadda iyo jaaliyadaha dibadda ayaa intuba u istaagay sidii loogu gurman lahaa dadka tabaaleysan, waxan loo xil saaray arintaasi guddi isku dhaf ah oo dowladda, culimada iyo bulshada rayidka iskugu jira.
Wafdiga Madaxweynaha ayaa waxa ku jira wasiiro, hawlwadeeno iyo weliba culimadda Puntland, waxaana dadka ku nool deegaankaas loo iibiyey in ka badan 15 kun oo neef, kuwaasi oo lagu wareegin doono markii ugu horeysay qoysaskii ku cayroobay duufaanta.
Saddex geesoodka Eyl, Dangorayo iyo Bayla u dhaxeeyaa ayaa ugu badan deegaamada ay duufaatu saameynta ku yeelatay, waxaana Faroole markuu duufaantaasi dhacday awoodi waayey inuu deegaanadaas badankood gaaro, wadooyinka oo xumaaday aawgeed.
Booqasahda Faroole ee deegaanada duufaantii xooganeyd ku dhufutay bishii hore November ayaa kusoo beegmay xilli musharraxiinta xilka madaxtinimada Puntland ay bilaabeen ololahooda doorasho.
Shirkadda Google Oo Adeegeeda Wax Tarjuma Ku Dartay Afka Soomaaliga